Wargeyska Falköping oo sharaxaya xaqiiqada soo galootiga | Somaliska
Wargeyska Falköpings Tidning ayaa bilaabay barnaamij taxane ah oo socon doona laba isbuuc kaasoo maalinkasta 1 bog oo buuxa wax looga qori doono xaqiiqada soo galootiga magaaladaas ku nool. Wargeyska ayaa arintaan bilaabay ka dib markii ay siyaaday nacaybka loo qabo soo galootiga iyo dooda ku saabsan arimahooda. Tifaftirka wargeyska ayaa sheegay in 6 bilood ee la soo dhaafay ay soo gaareen waraaqo badan oo ka turjumaya naceybkaas ayagoo sheegay inta badan dadku waxa ay ka aaminsan yihiin soo galootiga ah tahay waxyaabo aan xaqiiqo ahayn. "Maanta waxaan ka hadlaynaa xaqiiqooyin badan oo ku saabsan soo galootiga, nidaamka ay maraan marka ay Sweden soo galaan iyo lacagaha ay qaataan. Waxaan sidoo kale soo bandhigeynaa sheeko ku saabsan luuqada" ayuu yiri Leif Claesson oo ah tififtiraha wargeyska. "Barito waxaan soo bandhigeynaa meelaha ay ka kala yimaadaan soo galootiga ku nool Falköping anagoo booqan doona Xanaano ay dhigtaan caruur ka timid 17 wadan oo kala duwan" ayuu hadalkiisa ku daray Leif Claesson. Wargeyska ayaa barnaamijka uga dan leh in af ay ku hadlaan la siiyo soo galootiga magaalada ku nool iyo in la sharaxo waxyaabo badan oo been abuur ah oo laga aaminsanyahay. Mashruucaan uu bilaabay wargeyska Falköping ayaa ah mid aad qiimo u leh oo ay fiicantahay in ay ku daydaan wargeysyada kale ee ka soo baxa dalka. Dhibaatada ugu weyn ee haysata soo galootiga ayaa ah in aanan lahayn af aan kula hadalno bulsha waynta Sweden ayadoo ay fududahay in nagala been abuurto oo beentaas lagu faafiyo bulsha weynta. Magaalada Falköping ayaa waxaa ku nool Somali fara badan. Hada ka hor ayaa dhowr qof oo Soomaali ah oo halkaas ku nool waxaa loo diray fariimo naceyb ah oo oranaya ku laabta Afrika. Waxaan ku talinayaa in Soomaalida aqrisata mowduucaan ay ku dhiiri galiyaan wargeysyada ka soo baxa kamuunada aad ku nooshihiin in ay bilaabaan barnaamij la mid ah kan Falköpings Tidning.
Wargeyska Falköping oo sharaxaya xaqiiqada soo galootiga
Wargeyska Falköpings Tidning ayaa bilaabay barnaamij taxane ah oo socon doona laba isbuuc kaasoo maalinkasta 1 bog oo buuxa wax looga qori doono xaqiiqada soo galootiga magaaladaas ku nool. Wargeyska ayaa arintaan bilaabay ka dib markii ay siyaaday nacaybka loo qabo soo galootiga iyo dooda ku saabsan arimahooda.
Tifaftirka wargeyska ayaa sheegay in 6 bilood ee la soo dhaafay ay soo gaareen waraaqo badan oo ka turjumaya naceybkaas ayagoo sheegay inta badan dadku waxa ay ka aaminsan yihiin soo galootiga ah tahay waxyaabo aan xaqiiqo ahayn.
“Maanta waxaan ka hadlaynaa xaqiiqooyin badan oo ku saabsan soo galootiga, nidaamka ay maraan marka ay Sweden soo galaan iyo lacagaha ay qaataan. Waxaan sidoo kale soo bandhigeynaa sheeko ku saabsan luuqada” ayuu yiri Leif Claesson oo ah tififtiraha wargeyska.
“Barito waxaan soo bandhigeynaa meelaha ay ka kala yimaadaan soo galootiga ku nool Falköping anagoo booqan doona Xanaano ay dhigtaan caruur ka timid 17 wadan oo kala duwan” ayuu hadalkiisa ku daray Leif Claesson.
Wargeyska ayaa barnaamijka uga dan leh in af ay ku hadlaan la siiyo soo galootiga magaalada ku nool iyo in la sharaxo waxyaabo badan oo been abuur ah oo laga aaminsanyahay.
Mashruucaan uu bilaabay wargeyska Falköping ayaa ah mid aad qiimo u leh oo ay fiicantahay in ay ku daydaan wargeysyada kale ee ka soo baxa dalka. Dhibaatada ugu weyn ee haysata soo galootiga ayaa ah in aanan lahayn af aan kula hadalno bulsha waynta Sweden ayadoo ay fududahay in nagala been abuurto oo beentaas lagu faafiyo bulsha weynta.
Magaalada Falköping ayaa waxaa ku nool Somali fara badan. Hada ka hor ayaa dhowr qof oo Soomaali ah oo halkaas ku nool waxaa loo diray fariimo naceyb ah oo oranaya ku laabta Afrika.
Waxaan ku talinayaa in Soomaalida aqrisata mowduucaan ay ku dhiiri galiyaan wargeysyada ka soo baxa kamuunada aad ku nooshihiin in ay bilaabaan barnaamij la mid ah kan Falköpings Tidning.
March 17, 2011 at 09:15
Wasiirkii warfaafinta u qaabilsanaa Hitler ayaa laga hayaa in uu warbaahintii maamulkiisu gacanta ku hayey kula taliyey beenta sheega kuna cel-celya ayadaa run noqonaysee. Taas waxaan kawadaa been abuurka qaxootiga laga sameeyey in badan baa lagu cel-ceshe sidaa darteed hada run bay u ekaata, intaas oo ay waliba sii dheertahay habdhaqanka qaar kamid ah qaxootiga oo been-abuurka la sameeye ayidaya. aad bay myhiim u tahay in aan war-baahinta la xariirno oo aan halgan u galno hagaajinta sawirka nagala haysto, anaga oo aan dhaqankeena iyo akhlaaqdeena midna ka tagayn.
ASC xaqiiqdi waa sax tan aad kahadashay ,,saciid,,wana kugu racsanahay
asc…aniga waxan qaba madama an wadanka ku nolnahay an xeerka u yala qiimeyno wixi nalagu ben aburtana beeni raad malaha llkn malesku hayo in falköping ey rasiste badan taahy balse wanu u samreyna si kuwa naga danbeya ey cadi ugu nolodan iyago la bartay falköpin wa tuulo tulana 10 sano aye ka danbeysa magalo sabab göteborg sacad aye u jirta falköping hadana waxa moda iney wax badan kala horeyan